संसद् पुनःस्थापना नभए आँधी हुरी आउँछः पुष्पकमल दाहाल | DNFMEDIA
संसद् पुनःस्थापना नभए आँधी हुरी आउँछः पुष्पकमल दाहाल
काठमाडौँ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद् पुनःस्थापना नभए नेपालमा ठूलो आँधी हुरी आउने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध काठमाडौँमा गरेको विरोध सभालाई आज बुधबार सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा उत्रिए के हुन्छ ? यो संविधान निर्माण गर्दा २००४ सालमा राणाहरुले बनाएको संविधानदेखि तमाम् संविधान अध्ययन गरेर कस्तो संविधान बनाउँदा जनताको हित हुन्छ भनेर बनाइएको छ,’ दाहालले भने, ‘आजको उपस्थितिले अदालतलाई फैसला गर्न सहज भएको छ । त्यसो भएन भने आँधी आउँछ, हुरी आउँछ कसैले थाम्‍न सक्दैन ।’
उनले अदालत, निर्वाचन आयोग सबैले केपी ओलीको विपक्षमा फैसला गर्ने विश्वास आफूलाई रहेको पनि बताए । ‘संवैधानिक निकायहरुले केपी ओलीजस्तो निरंकुश व्यक्तिको डरको भरमा फैसला गर्छन भनेर म पत्याउँ त ? जनताले पत्याउँछन् ?’ उनले भने, ‘केपीतिर लागेकाहरु फर्कन लामो लाइन छ । अरु त अरु उहाँसँग रहेका २ जना मन्त्री पनि फर्कन म सँग वार्ता गर्दैछन् ।’
उनले ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिएर पश्चताप गर्न पनि सुझाब दिए ।
Previous: प्रचण्ड–माधव समूहद्वारा आज काठमाडौंमा दुई लाख मानिस उतार्ने दाबी
Next: आक्रोसलाई बुझ्‍न नसके बालुवाटार घेर्ने प्रचण्डको चेतावनी